ATN: ကျနော့် အကြိုက်ဆုံးများ
ကျနော့် ဘလော့ကို စရေးဖြစ်တာ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်မှာပါ။ ကျနော် ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ ကဗျာဆရာ ယောဟန်အောင်ရဲ့ ဘလော့ကို ဖတ်မိပြီး သူ့လို ဘလော့လေးတခု ပိုင်ချင်စိတ် ဖြစ်လာတာကနေ ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ စရေးကာစတုန်းက ဇော်ဂျီတွေ ဘာတွေ ကျနော် မသိပါဘူး။ ကဗျာ ၄ ပုဒ်ကို ကျနော့်ဆီမှာရှိတဲ့ ၀င်း-ဘားမိစ်ဖွန့်နဲ့ ဖိုတိုရှော့ ထဲမှာ ရိုက်ပြီး ဂျေပီဂျီ ဖိုင်တွေနဲ့ တင်ခဲ့တာပါ။ နောက်မှ ဇော်ဂျီဖွန့်ကို သိလာပြီး ပြန်ရိုက်တင်တာပါ။ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်မှာ ကဗျာ ၄ ပုဒ်စလုံးကို တခါတည်း တင်ခဲ့တာပေါ့။ ခုဆို ကျနော် ဘလော့ရေးတာ ၂ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ သည် ၂ နှစ်အတွင်းမှာ စိတ်ထဲ ရှိရာတွေ လျှောက်ရေး လျှောက်တင်လိုက်တာ ပို့စ်ပေါင်း ၅၄၀ ကျော် ဖြစ်သွားပါတယ်။
ခုတလောလေးကမှ ဂျီမေးလ်ထဲမှာ အက်ဒ်လာလို့ ခင်မင်လာရတဲ့ ညီငယ် တယောက်က ပြောလာပါတယ်… “… … … … အကို့ ပို့စ်တွေက ၅၀၀ ကျော်တယ်... အများကြီးပဲ… ကျနော်တို့က အခုမှ အကို့ဘလော့ကို ရောက်ဖူးတာဆိုတော့ အားလုံးကို တခါတည်း ဖတ်ချင်ပေမယ့် အချိန် မရလို့ မဖတ်နိုင်သေးဘူး…။ အပမ်းမကြီးဘူးဆိုရင် အကို့ အကြိုက်ဆုံး ပို့စ်တွေကို ပြောပြပေးပါလား… ကျနော်တို့ ပြန်ဖတ်ရတာ လွယ်တာပေါ့…. ကျန်တဲ့ ပို့စ်တွေကိုတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖတ်ပါ့မယ်…. ”တဲ့…. ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ဆားချက်ဖို့ အကြံရသွားပါတယ်....း)
ဟိုး… တခါကတော့ ကျနော့် ဘလော့ရဲ့ ဆိုဒ်ဘားမှာ ကိုယ်တိုင် အကြိုက်ဆုံး ကဗျာများ… အကြိုက်ဆုံး ၀တ္ထုတိုများ... ဘာညာ… စသည်ဖြင့် ကျနော် တင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ရှုပ်ပါတယ်လေ ဆိုပြီး ပြန်ဖြုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ခုတော့ စောစောကပြောတဲ့ ညီငယ်လိုမျိုး ကျနော့် ဘလော့ကို အခုမှ ဖတ်ဖူးသူတွေ အတွက်ရော၊ ကျနော် ဘလော့ စရေးကတည်းက ဖတ်လာခဲ့သူတွေအတွက်ရော၊ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်း ညီအကို မောင်နှမတွေ အတွက်ရော နှစ်သစ်ကူး လက်ဆောင်အဖြစ် ကျနော် ကိုယ်တိုင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပို့စ်တွေကို စာရင်းပြုစု လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ပြီးသူများကတော့ သည်းခံကြပါ....း) မဖတ်ရသေးသူများအတွက်သာ အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်။
မဖတ်ရသေးသူများအတွက် အညွှန်းတခု ဖြစ်ပြီး ဖတ်ပြီးသူများအတွက်ကတော့ အမွှန်းတခု ဖြစ်ပါမယ်… ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန်...း)
ကျနော်က တကယ်တော့ ကဗျာတွေရေးဖို့ပဲ အားသန်တဲ့သူပါ... သို့သော်လည်း တခါတခါ ခံစားမှုတွေ စေ့ဆော်တဲ့အခါ ပန်းချီတွေဆွဲတယ်... (မဆွဲတတ်ပဲ ဆွဲနေတာပါ...း) သီချင်းဆိုတယ်... (အသံမကောင်းပဲနဲ့)... ခီးဘို့ဒ်တီးတယ်... (မတီးတတ်ပဲ တီးနေတာ) ဂစ်တာတီးတယ်... ဆောင်းပါး တချို့ ရေးတယ်.. ၀တ္ထုတွေလည်း ဖွဲ့မိသေးတယ်... အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တာ ဆိုရင် လုပ်လို့ရသမျှ အကုန် လျှောက်လုပ်တယ် ဆိုပါတော့...း) သည်တော့ ကိုယ်တိုင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပို့စ်တွေကတော့ အမျိုးကို စုံနေပါလိမ့်မယ်... ညီအကို မောင်နှမများကသာ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ် ကြပါကုန်...
(သည်ကဗျာရှည်ကတော့ ကျနော့် ၄၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက် ဖွဲ့ဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာရှည်ပါ။ ဘ၀မှတ်တမ်းလေးလဲ ဖြစ်ပါတယ်)
(ကျနော်က ကဗျာရေးသူဆိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကဗျာတွေက အတော်တော့ များနေ ပါလိမ့်မယ်...း)
နေရာတိုင်းမှာ စွန်းကွက်နေသော အပြာရောင်ဆေးစက်များ
အနောက်မြို့ရိုးမှာ ကျိုးပဲ့သွားတဲ့ မှန်တချပ်
လူတကောင်၊ ကြောင်တယောက်နဲ့ ပြတင်းပေါက်တချပ်
မြို့တမြို့၊ နစ်ချို့ဝိုင်တခွက်နဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတခု
အနှစ်နှစ်ဆယ်၊ မပြယ်သေးတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ သင်ခန်းစာတချို့
ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေး ချိုအောင်နေကြ
အထက်ပါ ပို့စ်တွေ အပြင် သူပုန်တယောက်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ များ၊ အက်စ်တိုးရီးယားနှင့် စကားပြောခြင်း ကဗျာများနဲ့ အမှတ်တမဲ့ ပေကျံသွားသော ဆေးစက်များ ကဗျာတိုလေးတွေကိုလည်း ဖတ်ကြည့်ကြဖို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။
အွမ်.. အကုန် - နီးပါး ပါလား..။း)
ကိုအောင်သာငယ်က.. စာရင်းစစ် လုပ်ဖုို့ ကောင်းတာ..။ စာရင်းပြုစု တာ တော်တယ်။း)
December 29, 2009 at 6:28 AM
ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့ ပိုစ့်တွေကို သေသေချာချာ မှတ်မိနေတယ်...း))
အကို့ အကြိုက်လေးတွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်...း))
December 29, 2009 at 6:46 AM
ကျွန်တော့်လို ဘလော့ဂ်လည်တာ နောက်ကျတဲ့သူအတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့။
(ကဗျာရှည်က လင့်ခ်မှားနေတယ် အကို၊ ပြင်လိုက်ပါဦး)
Top3စီလောက်ဆို တော်ရောပေါ့ဗျာ.. လောဘကြီးတယ်။
ကျွန်မမဖတ်ရသေးတာတွေလည်း အတော်များပါတယ်။ နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး ပြန်ဖတ်မှ ဖြစ်မယ်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
December 29, 2009 at 5:49 PM
အားးး များလှချည်လားဗျာ...အင်း မဖတ်ရသေးတာတွေက များနေတော့ အေးအေးဆေးဆေးမှ လာဖတ်ရတော့မယ်။
အခုလို စုတင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်ကို။ အားလပ်ရက်မှာ စာတွေ လာဖတ်ပါဦးမယ်။
December 30, 2009 at 3:04 AM
ဒီ ၃ ပုဒ် က လွဲ ပြီး ကျန်တာတွေ အားလုံး အကြိုက်တူပါတယ်..း)..
သစ္စာတိုင်.. အဲဒီကဗျာတွေကို အကြိုက်ဆုံး
ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ် လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝစေမဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ
ခုထိကောင်းတယ်ထင်နေသေးရင် မတိုးတက်သေးဘူးမှတ်.... ခွိခွိ :)
December 30, 2009 at 4:19 AM
So what is the best of the best among your post?? :D
ပြန်လာဖတ်အုံးမယ် အကိုရေ.. တချို့ ဖတ်ပြီးသား။
အကိုရေ.... ပျော်ရွှင် တဲ့ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာ တဲ့ ဘ၀ကို မိသားစုလေးနဲ့အတူ ပိုင်ဆိုင် ပျော်ရွှင်ရပါစေလို့ နှစ်သစ်မှာ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဆရာနှင်းခါးမိုး ပြောပြောနေတဲ့ မိုး သုံးမိုး -ထဲက တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆရာ ထက်မိုးရဲ. ကဗျာတပုဒ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မွေးမြေ-လို. အမည်ရပါတယ်။ ဆ...
အားလုံး နှစ်သစ်မှာ အစစ အရာရာအဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါေ...
မရှိတော့ပြီဖြစ်သော မိခင်နှင့် စကားပြောခြင်း
အက်စ်တိုးရီးယား (၉) - သို့မဟုတ် - နိဂုံး
How Deep Is Your Love On Me
အမည်မပေးလိုသော... ... ...